Samsung Gear Fit2 Pro ga-abụ ezigbo enyi maka Samsung Galaxy Note 8 | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Gear Fit2 Pro ga-abụ ezigbo enyi na Samsung Galaxy Note 8
Na-esote August 23, Samsung akwadebewo otu n'ime ihe omume kachasị atụ anya ya. Ma ọ bụ na mgbe fiasco nke afọ gara aga na akara ngosi ya, afọ a ọ na-emeghachi. Ma, ee, ihe a mụtara. Ọzọkwa, ọnwa mgbe batrị na-enwu ọkụ, akara ahụ n'onwe ya gbakọtara mgbasa ozi iji kwuo maka ihe ga-abụ modus operandi ọhụrụ ya mgbe a na-ewu ebe ọhụụ ọhụrụ. Samsung Galaxy Note 8 dị ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eziokwu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ ga-abụ isi protagonist nke mgbede.
Otú ọ dị, ebe ọ bụ na Akwụsị Ọkụ Ha achọpụtala na ọ bụghị naanị gị ga-abịa nnọkọ a. Samsung bụkwa ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike na ngalaba nke Wearables. Na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ gbasara ndị otu elebara anya na egwuregwu. Iji O yiri ka a ga-enwe Samsung Gear Fit2 Pro na ụzọ. Na August 23 ga-abụ oge iji kpughee ya ọha mmadụ.
Nke a Samsung Gear Fit2 Pro bụ ụdị ọhụụ nke ga-adabere na sistemụ arụmọrụ nke Samsung. Ọ bụ maka mara Tizen ejirilarịrị ụdị nke ụdị. Ọ ga-abụkwa elekere smart nke nwere ike ịmaba n'ime omimi nke 100 mita. Ọ bụ ya mere e ji kpughee na egosiri ya ịdebe ọdọ mmiri ndị anyị na-eme yana egwuregwu ọ bụla metụtara mmiri. N'ihi ya a na-etinye ngwa Speedo On.
Ọzọkwa, n'ime ọ ga-eburu mgbawa GPS. N'ihi ya, ọ gaghị adị mkpa ka e jikọta ya na a smartphone nke mere na Samsung Gear Fit2 Pro nwere ike ịnye anyị data na njem dị anya, ọsọ ma ọ bụ usoro emere. A marakwa nke a wearable ọ ga-abụ dakọtara na offline Spotify anatara. Ya mere, ha na-egosikwa na mkpanaka ahụ nwere ike ịnọ n'ụlọ na-enweghị nsogbu yana Samsung Gear Fit2 Pro ga-adaba na ekweisi ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Samsung Gear Fit2 Pro ga-abụ ezigbo enyi na Samsung Galaxy Note 8
SPC One Ọkà okwu, ọkà okwu maka ndị niile na-ege ntị [Nyocha + SWEEPSTAKES]
Ahịa Facebook na-abịa Europe iji mee mkpọtụ Wallapop